I-Meitu, uhlelo lokusebenza olunezithombe olusebenza kuphela ukweba idatha yakho | Izindaba zamagajethi
Meitu, isicelo sezithombe esisebenza kuphela ukweba idatha yakho
Sibuyela ku-Android sinezinkinga ezincane noma ezingaphansi kunezinkinga ezifanayo njalonjalo. Ukuphepha kungumsebenzi osalindile we-Android ngaphandle kokungabaza, futhi ihlazo lakamuva lifika namuhla. Futhi ukuthi i-Google Play Isitolo imvamisa ingenye yemithombo ethandwa kakhulu yamagciwane ohlelo lokusebenza lwe-Google. Namuhla sifuna ukwaziswa ngakho IMeitu, uhlelo lokuhlunga olunezithombe olungabonakala luhehsa kakhulu, kepha inhloso yalo kuphela ukuthola yonke idatha kusuka kudivayisi yakho nethrafikhi nazo. Uma ufake iMeitu, ungathathi imizuzwana engaphezu kweyishumi ukuyisula.
Lolu hlelo lokusebenza lufihliwe ngemuva kwesihleli sesihlungi sesithombe esidume kakhulu eChina futhi sesedlule imingcele yaso. Noma kunjalo, uhlelo lokusebenza lune-malware ekwazi ukulawula ngokuphelele idivayisi yethu ye-Android. Ngale ndlela, ngeke babe nokufinyelela kuphela kudivayisi, kodwa futhi nezinombolo zethu zefoni, amaphasiwedi esiwasebenzisa kusuka ku-Facebook kuya ebhange lethu ... Ngamafuphi, inhlekelele yezokuphepha engadala izinkinga ezinkulu ngokusebenzisa nje uhlelo lokusebenza, akukaze kube lula ukudalula amakhulu ezigidi zabasebenzisi.
Okungenani kubonakala sengathi uhlelo lokusebenza aludumile kakhulu, noma kunjalo, lolu lonke ulwazi oluvela kudivayisi yethu uhlelo oluthunyelwa kumaseva e-China:
Uhlelo oluqondile lokusebenza
Okufana nenhlekelele yangempela ngamafuphi. Ngakho-ke kufanele ucabangele ukulahla uhlelo, ushintshe wonke amaphasiwedi ezinhlelo zokusebenza ozifaka kusuka kudivayisi yakho futhi ezingacekela phansi ubumfihlo bakho futhi mhlawumbe zibuyise nohlelo olusebenzayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Meitu, isicelo sezithombe esisebenza kuphela ukweba idatha yakho
Ungayeka ukusebenzisa igama elithi "futhi yilokho"?
Ingabe kuyefana ngama-iphones?
Ukunikezwa kwe-umpteenth kwe-Samsung Galaxy S8
IHonor 8 iqala ukuvuselelwa ku-Android 7.0 Nougat